Tanàn-dehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Tanàna marani-tsaina indrindra eto amin'izao tontolo izao
Smart City Expo World Congress 2021 dia mamerina miaraka ny indostria fanavaozana an-tanàn-dehibe
Smart City Expo World Congress (SCEWC), ny fihaonambe iraisam-pirenena lehibe indrindra momba ny tanàna sy ny vahaolana an-tanàn-dehibe nokarakarain'i Fira de Barcelona, ​​dia hampivondrona ny indostrian'ny fanavaozana an-tanàn-dehibe indray sy amin'ny olona hankalaza ny faha-10.th tsingerintaonan'ny hetsika. Ny 16 ka hatramin'ny 18 Novambra, miaraka amin'ny fampirantiana maherin'ny 400 sy mpandahateny 300, ary eo ambanin'ny lohahevitra Isika no tanàna anaovantsika, ny hetsika dia hisaintsaina ny fanovana ny metropolises taorian'ny areti-mandringana sy ny filana manome fahafaham-po ny filan'ny olom-pireneny mihoatra ny teo aloha.
Ny hetsika dia hanangonana ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena sy orinasa lehibe hizara fahalalana sy hiatrika ireo fanamby maro tafiditra amin'ny fanovana tanàna. Ho fandrakofana ireo sehatra maro tafiditra, ny programa kongresy dia amboarina amina lohahevitra valo, Teknolojia Enabling, angovo & tontolo iainana, fivezivezena, fitantanana, fiainana & fampidirana, toekarena, fotodrafitrasa & tranobe ary fiarovana sy filaminana.
Ny vahaolana an-tanàn-dehibe dia singa iray manankery eo amin'ny tontolo iainana an-tanàn-dehibe, ary ireo orinasa mpampiranty 400 dia hampiseho ny vokatra sy ny haitao farany azony. Anisan'ireo orinasa ireo ny Abertis Mobility Solutions, Cisco, City Possible by Mastercard, FCC Environment, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports: Piers of the Future ary Ubiwhere. Toy izany koa, tanàna sy firenena maro no haneho tetik'asa vao haingana, anisan'izany ireo avy any Argentina, Austria, Barcelona, ​​Belzika, Berlin, Brasil, Buenos Aires, Canada, Chile, Colombia, Estonia, Finlande, France, Germany, The Hague, India, Italia, Latvia , Netherlands, Norvezy, Paris, Polonina, Suède ary Etazonia.
filankevitra manerantany UCLG izy
SCEWC koa dia hanome ny toerana ho an'ny Filan-kevitr'izao tontolo izao an'ny United Cities and Local Governments Organization (UCLG), ny fivoriana isan-taona an'ny tambajotram-pifandraisana lehibe indrindra eran-tanàna sy governemanta eo an-toerana, isam-paritra ary ny metropolitan. Hivory ao Barcelona ny UCLG, mitondra ny lohateny hoe "Smart Cities and Territories, Pillars of the Common Agenda" hamaritana ny paikadin'ny hetsiky ny tanàna sy ny anjara birikiny ho an'ny UN Common Agenda.
Ny hoavin'ny fivezivezena sy fitaovana
Ny SCEWC dia hanamafy ny andraikiny amin'ny maha sehatra fifampizaràna fahalalana amin'ny fampiantranoana hetsika roa vaovao: Tomorrow.Mobility and PUZZLE X. Tomorrow.Mobility dia karakarain'ny EIT Urban Mobility ary hifantoka amin'ny fampiroboroboana ny famolavolana sy ny fananganana ny fivezivezena an-tanàn-dehibe vaovao maharitra. modely, raha PUZZLE X, miara-miasa amin'ny Advanced Material Future Preparedness Taskforce sy ny Mobile World Capital Barcelona, ​​dia mikendry ny hahatakatra ny mety ho fitaovana Frontier hamahana ny sasany amin'ireo fanamby atrehin'ny fiaraha-monina.